Waa maado maan doorisa qufka.
Qaar ka mid ah sigaarka maanta dunida laga cabo.
Baakadh sigaar ah
Sigaar (ingiriis: Cigarette) waa buuri ku duuban warqad khafiif ah kaas oo la cabo qiiqiisa. Sigaarka oo u sameeysan qaab dhuuban ayaa hal dhinac dab laga qabadsiiyaa isla markaana laga nuugaa dhinaca kale, taas oo qiiqu tago sambabada qofka cabaya.
Buuriga ama tobaakada sigaarku ka kooban yahay aad ayay u kala duwan tahay waanay kala qadar iyo halis badan tahay.
Sigaarku waxa uu ka mid yahay mukhaadaraadka, sababtoo ah waa wax lala qabsado oo qofka isticmaalo mar kasta u baahan yahay.
Cabitaanka sigaarku waxay keentaa xanuuno badan, isla markaana bur-burisaa dhaqaalaha qofka isticmaala.
Buuriga laga sameeyo sigaarka waxa ku jira kimikooyin badan ooy ka mid tahay Nicotine, taas oo ah daroogo halis ah oo waxyeeleeysa caafimaadka qofka isticmaalaya.
In ka badan 60% dadka caba sigaarka waxay u dhintaan xanuuno la xidhiidh sigaarka. Isticmaalka sigaarka wuxuu keenaa cimri deg-deg, midabka oo is-bedela, ilkaha oo casaada iyo xanuuno badan oo halis ah sida xanuunka "Kansarka" sambabada, kansarka dhuunta, kansarka faruuryaha iyo kuwo kale oo badan.
Dumarka sigaarka caba wakhtiga eey uurka yihiin waxay keentaa ineey dhalaan ilmo aad u liita oo misaankiisu ka hooseeyo ilmaha eey dhasho hooyo aan sigaar cabin.
Sidoo kale, neefsiga qiiqa sigaarka qof kale cabayo ayaa iyadna keenta xanuuno dhibaato u geeysan kara qofkaas. Taasi waa sababta looga mamnuucay in sigaar lagu cabo meelaha bulshadu iskugu timaado. Markaa haddii aad sigaar cabto iska jooji, haddii aanad cabin iska ilaali in aad neefsato qiiqa sigaar qof kale cabaayo sababto ah adiga dhib ayaa ku soo gaari karta.
W/Q; Mohamed Hassan Abdulle Bakaal
1 Taariikhda Maxamed Xasan Cabdulle Bakaal
2 Isticmaalka Sigaarka
3 Dhaqaalaha & Sigaarka
4 Ganacsiga Sigaarka
4.1 Shirkadaha Soo Saara
4.2 Qiimaha Sigaarka
4.3 Wadanada Dhoofiya Sigaarka
5 Waxyeelada Caafimaadka
Taariikhda Maxamed Xasan Cabdulle BakaalEdit
Waxa la sheegaa in qarnigii 9aad eey qabiilo ka mid ah beelahii degenaa Waqooyiga Ameerika sida qabiilka Maaya loo yaqaan iyo Aztecs isticmaali jireen buuriga ama tobaakada sigaarka laga sameeyo.
Waxay ahay qarnigii 17aad markii buuriga sigaarka la keenay qaarada Yurub halkaas oo loo farsameeyay qaabka aan maanta u naqaano sigaarka.
Sigaarka intiisa u badan waxaa dunida gaadhsiiyay gumeeystayaashii reer Yurub.
Meherad sigaarka lagu iibiyo
Sanadkii 2002da tirokoob la sameeyay waxaa lagu ogaaday in qiyaastii 5.5 tiriliyan oo Sigaar ah warshadaha Sigaarku soo saaraan sanadkiiba; taaso oo eey cabaan in ka badan 1.1 bilyan oo dad ah.
Cabitaanka Sigaarka Lab iyo Dhedig (2000)
Dhaqaalaha & SigaarkaEdit
Warshado badan ayaa sameeya isla markaan dhoofiya Sigaarka.
Wadanada ugu Badan ee Sigaarka Laga Cabo (1998)
Tirada Guud e Sigaarka la Cabo
Tirada Sigaarka la Cabo
Shiinaha 1,248 1,643 1,320
Maraykanka 270 451 1,670
Jabaan 126 328 2,600
Ruushka 146 258 1,760
Indoneesiya 200 215 1,070
Sigaarka waxaa laga sameeyaa caleemaha iyo laamaha geedka buuriga, kuwaas oo laga beero meelo badan oo kala duwan.
Shirkadaha Soo SaaraEdit
Warshado badan ayaa sameeya isla markaana ka ganacsada sigaarka. Liiska Shirkadaha ugu horeeya soo saarida iyo dhoofinta sigaarka waxaa ka mid ah:
Qiimaha suuqa/20 Baakidh
Ayarlaan (Ireland) 11.60 9.10 €9.10 2012-07-16 
Ingiriiska (UK) 12 9.40 £7.50 2012-03-21 
Boolaan (Poland) 4.75 3.70 15.50 PLN 2013-05-18
Maraykanka (New York) 12.50 9.80 $12.50 2012-06-26 
Maraykanka (Virginia) 4.60 3.50 $4.56 2013-04-11 
Ustaraaliya (Australia) 13.50 10.50 A$13 (A$16/ 25 pack) 2013-11-03 
Singabuur 8.60 6.60 $11.20 2012-12-27
Malaysiya 3.70 2.81 12.00 RM 2012-12-27
Koonfur Afrika 3.11 2.33 R31.00 2013-06-14 
Kanada 10.75 7.92 C$11.20 ($14/25 pack)
Indoneesiya 2.40 2.00 Rp 24.000 2012-11-20
Wadanada Dhoofiya SigaarkaEdit
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Sigaar&oldid=193045"
Last edited on 25 Juun 2019, at 10:05
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Juun 2019, marka ee eheed 10:05.